Ivon-toerana momba ny fiarovana ny vahoaka
Torohevitra momba ny fitantanana vonjy maika
Fanofanana teknika famonjena eken'ny ITRA
Tongasoa eto Ivon-toerana momba ny fiarovana ny vahoaka
Ny PSI dia manome serivisy manerana izao tontolo izao amin'ny famakafakana forensika momba ny fiarovana ho an'ny daholobe, consultant, fikarohana, fanabeazana ary fiofanana. Amin'ny alalan'ny tambajotra iraisam-pirenenan'ny mpanolo-tsaina manam-pahaizana dia afaka miatrika tetikasa izahay mba hiantohana ny valiny mahomby kokoa amin'ny fanamby ho an'ny daholobe rahampitso manomboka amin'ny fitantanana ny loza ka hatramin'ny famonjena ara-teknika.
Fakan-kevitra momba ny fiarovana ho an'ny daholobe sy famakafakana forensika ataon'ireo manam-pahaizana momba ny tontolo tena izy manana mari-pahaizana diplaoma.
Fanofanana eran'izao tontolo izao eken'ny ITRA, anisan'izany ny tady, ny toerana voafetra ary ny famonjena ny rano. Avy amin'ny ambaratonga fototra ka hatramin'ny mpampianatra.
Manolotra fikarohana momba ny fiarovana ny vahoaka izahay, manomboka amin'ny fitantanana vonjy maika, ny fiahiana ny biby ka hatramin'ny famonjena ara-teknika.
Fampiofanana fiarovana amin'ny tondra-drano
Raha manana mpiasa miasa na mitondra fiara manodidina ny renirano, dobo, lakandrano na lalan-drano hafa ianao, efa nahafeno ny adidinao ve ianao mba hiarovana azy ireo araka ny lalàna momba ny fahasalamana sy ny fiarovana?
Manolotra fiofanana momba ny fiarovana amin'ny rano izahay Fikambanana iraisam-pirenena mpamonjy voina.
Ireo fampianarana momba ny tondra-drano sy ny Swiftwater amin'ny fiteny maro dia maimaim-poana izao
Ny fampianaranay an-tserasera rehetra izao dia amin'ny fiteny maro mampiasa GTranslate. Ity sehatra matanjaka ity dia mampiasa fandikana milina neural mba hanomezana ny kalitaon'ny fandikan-teny amin'ny olombelona. Hamaky bebe kokoa
Atrikasa mpampianatra famonjena fiara Swiftwater
Public Safety Institute dia faly mampahafantatra fa ny Atrikasa Mpampianatra Fanavotana fiara Swiftwater ITRA izay hatao ny 10-14 Jona 2020 ao amin'ny Mangahao Whitewater Park, Shannon, Nouvelle-Zélande. <="" p=""> Hamaky bebe kokoa
Antso ho an'ny fangatahana Sponsorship iraisam-pirenena
Raha fikambanana ivelan'i Nouvelle-Zélande sy Aostralia ianao, dia mitady fisoratana anarana ho liana ny PSI mba hanampiana fikambanana tsy ampy fitaovana hampivelatra ny fahaiza-manavotra ny tondra-drano ao amin'ny fireneny. Hamaky bebe kokoa
© Copyright 2021 . Zo rehetra voatokana. Fepetra | politika fiarovana fiainan'olona